सिध्याउने कि सिद्धिने बाटोमा नेकपा : विनोद ढकाल – JanaSanchar.com
सिध्याउने कि सिद्धिने बाटोमा नेकपा : विनोद ढकाल
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७५ भाद्र १७, आईतवार) १२:२९
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेसँग एकीकरण गरेपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग माओवादको साइनो साँघुुरो छ । माओवादका केही सैद्धान्तिक मान्यतालाई नेकपाले ‘एडप्ट’ गरे पनि उसको आधिकारीक सैद्धान्तिक लाइन अब– लोकतान्त्रिक ‘कम्युनिज्म’ बनिसकेको छ ।
यसैका आधारमा नै तल्ला कमिटीसम्मको एकीकरण प्रक्रियालाई एउटा गति दिने निर्णय नेकपाले गरिसकेको छ । भ्रातृ र जनवर्गीय संगठनको एकीकरणको ढाँचा पनि यहि प्रक्रियामा जाने नेताहरूले बताइसकेका छन् ।
माओवादको ‘ख्याउटे’ आदर्श बोकेर हिँडिरहेका छन्, मोहन बैद्य किरण । तर, उनको पार्टीको नाम पनि माओवादी होइन । नेपाल क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा विज्ञप्ति निकाल्ने र शुभकामना दिने भन्दा उनको अर्को काम छैन । जस्तो पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले बेला मौका धार्मिक दिवस र प्रजातन्त्र दिवसका दिन दिँदै आएका छन् ।
यसबीचमा नाममा कायाकल्प गरी पुच्छरबाट ‘माओवादी’ हटाए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समुहले ‘माओवाद’को शैलीलाई अपनाउन छाडेको छैन । नेपाल वा भारतको माओवादको आदर्श एकै छन् र तिनको कर्मचाहीँ ‘हिंसात्मक द्वन्द्व’ हो । जसलाई उनकै भाषामा ‘जनयुुद्ध’, समानान्तर सरकारलाई ‘जनसरकार’ भनिँदै आएको छ ।
प्रहरीले विभिन्न ठाउँबाट सूचना संकलन गरी एक करोडभन्दा बढी रकम युद्धको तयारीका लागि हतियारसहित बन्दोबस्तीका सामान खरिद गरेको रिपोर्ट तयार पारेको छ
१० बर्षको हिंसात्मक आन्दोलनबाट स्थापित भएको तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको परिस्कृत र विसर्जित प्रारूपसँगै विभिन्न झुन्डमा बाँडिएका शक्ति फरक कित्तामा छन् ।
नेत्रबिक्रम चन्द त्यसमध्येका एउटा ‘तिखो चोइटो’ हुन् जसले नेपाली समाजको तल्लो तहलाई माओवादको शैलीमा घोच्न थालेका छन्, सुरक्षा संयन्त्रको उपल्लो तहसम्म यसको गोप्य सूचना र तयारीका योजनाबारे जानकारी भइसकेको छ । भारतको विस्तारवादी नीतिकाविरुद्ध आगो ओकलिरहेका विप्लव चुनावको पक्षमा कहिले रहेनन्, सत्ता कव्जाको नीति र नियतमा नै हिंसाको बाटोमा अघि बढीरहेका छन् । त्यसकारण राजनीतिक वृत्तमा उनी नेपालमा माओवादका अन्तिम ‘पुत्ला’ हुन् ।
विप्लवको रहस्य के हो ?
नेत्रविक्रम विप्लव महासचिव रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हिंसात्मक युद्धको तयारीमा तिव्रता दिएको छ । जन सेना गठनदेखि तालिमको तयारी गरिरहेका बेला सरकारले आफ्ना प्रभावशाली मानिएका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड पक्राउ गरि विभिन्न मुद्दा लगाउने कोशिश गरेपछि विप्लव समुह अझ सशक्त तयारीमा उत्रिएको छ ।
कम्युनिस्ट र माओवादीका नाममा मोहन वैध किरण कमजोर भएको, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसँग आत्मसमर्पण गरी सहिद, वेपत्ता र जनयुद्धमा मारिएका परिवारको सपनालाई तुहाएको भन्दै विप्लवले युद्धको तयारी थालेका हुन् । त्यसका लागि नेकपाले दुई रणनीति अपनाएको छ । ग्रामिण भेगमा छापामार युद्ध र सहरमा प्रविधिको युद्धलाई तिव्रता दिने उसको योजना छ ।
नेपाल प्रहरीले पनि विप्लव समुहको युद्धको तयारी रहेको सूचना प्रहरी प्रधान कार्यालयसम्म पुराएको छ । गृह मन्त्रालयमा पनि यहि व्रिफिङ गरिएको छ । भूमिगतरुपमा सैन्य दस्ता निर्माण गरिरहेको दावी गर्दै प्रहरीले त्यसका लागि नेकपाले सैन्य दस्ता पोशाक, बन्दोबस्ती र प्राविधिक (हातहतियार र गोलाबारुद) का लागि दुई वर्षमा एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेको रिपोर्ट तयार पारेको छ । विप्लव समुहको बहिखाता फेला पारेको प्रहरीले भुमिगत केन्द्रहरूमा छापा मारेको थियो । बहिखाता नेपाल प्रहरीको महाराजगञ्जस्थित विधिबिज्ञान प्रयोगशालामा परिक्षण भईरहेको छ ।
एकातिर नेता कार्यकर्ता पक्राउ गरी अदालतलाई समेत चुनौति दिने सरकारले बोलाएको वार्तामा नजाने भन्दै विप्लव समूह युद्धको तयारीमा नै जुटेको छ
आफ्ना विभिन्न ठाउँका नेता कार्यकर्ता पक्राउ गरी कारबाहीसहित मुद्दा लगाइएका कारण सरकारले बोलाएको वार्तामा नआउने विप्लव समुहले जनाइसकेको छ ।
तर नेता कार्यकर्ता पक्राउ गरिरहेको भन्दै चन्द नेतृत्वको दलका स्थायी कमिटीका सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीले वार्ता टोली गठनको औचित्यमै प्रश्न उठाए । सरकारले दमन गर्ने नीति लिएको र वार्ताको नाटक गरेको ओलीको ठम्याई छ । उच्च स्तरीय वार्ता टोलीले भने अर्को हप्ताबाट नै काम थाल्ने गरी तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
वार्ता टोलीका संयोजक सांसद सोमप्रसाद पाण्डे दुई तिहाइको सरकार स–साना कुरामा अल्झिन नपरोस् भनेर समस्या सुल्झाउन यो कदम उठाएको बताए ।
सक्किन्छन् कि सिध्याउँछन् ?
सरकार माओवादका नाममा कुनै पनि समुहले टाउको नउठाओस् भन्ने मनसायमा छ । त्यसैको परिणामका आधारमा विप्लवले तयार पारेको छापामार युद्धको ‘झिल्को’लाई गृहमन्त्री बादल निभाउन चहान्छन् । न्यायीक प्रणालीले उनलाई बारम्बार रोकीरहे पनि प्रहरीलाई प्रस्ट निर्देशन छ– जहाँ भेटियो त्यहि पक्राउ गर्ने ।
तर विप्लव समुहले हिंसात्मक आन्दोलनको विकल्प देखेको छैन । उसले छापामार युद्ध जारी राखेर यो राज्यसत्तालाई धरासायी पार्ने योजना बनाएको बताइन्छ । कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले भारतका औपचारिक र अनौपचारिक समुहले विप्लवको प्रत्यक्ष र परोक्ष सहयोग गरिरहेको पनि बताउँछन् । स्थायी सरकारको संयन्त्रलाई भंग गरी विभाजित राजनीति र समाजिक बनोटमा भारतीय प्रशासनको ‘रुल’ हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको ‘प्यादा’ विप्लव बनिरहेको भन्ने बुझाई पनि छ ।
यो झिल्कोलाई प्रचण्डलगायतले निभाउन चहान्छन् । यिनको राजनीतिक र सैन्य योजनालाई निमिट्यान्न पार्ने राज्यको तयारी छ । तर, आन्दोलनको स्वरुप र तयारी तथा त्यसको ‘व्याकप’को शक्तिलाई नजरअन्दाज नगर्ने हो भने एउटा प्रश्नले धेरैलाई गाँजेको छ । यो राजनीतिक संस्कार सिध्याउँछन् वा आफैं सिध्दिन्छन् ?
(२०७५ भाद्र १७, आईतवार) १२:२९ मा प्रकाशित